News Collection: शाहरुख-गौरी सम्बन्ध चिसियो
शाहरुख-गौरी सम्बन्ध चिसियो
बलिउडमा किङ खानको सम्मान पाएका नायक शाहरुख खान कलाकारिता जति सफल छन्, सहकर्मीमा पनि उत्तिकै लोकपि्रय । उनी कसैको कुभलो गर्दैनन् र ठूलो हुनुको घमण्ड पनि गर्दैनन् । अझ शाहरुख घरमा पनि सक्षम छन् । अर्थात् कुशल पति हुन् । बलिउडमा आदर्श जोडीका रूपमा सबैले आदर गर्ने शाहरुख-गौरीको दाम्पत्य जीवनमा समेत चिसोपना आएको समाचार बाहिर आएका छन् । 'आगो नबली धुवाँ आउँदैन' भन्ने मान्यता राख्ने समाजमा शाहरुखलाई कसले आगो लगायो त ?
'प्रियंका चोपडाले,' स्रोतको दाबी छ । नायक साहिद कपुरसँगको प्रेमसम्बन्ध टुक्रेपछि एक्लो जीवन बिताइरहेकी नायिका प्रियंका पछिल्लो पटक शाहरुखसँग 'डन २' फिल्ममा काम गरेकी थिइन्, जुन फिल्म सफल पनि बन्यो ।
२० वर्षे वैवाहिक जीवनमा अहिलेसम्म परस्त्रीसँग नाम नजोडिएका भलादमी शाहरुखलाई काली सुन्दरी प्रियंकाले भने 'कुछ कुछ' बनाएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै हल्ला बाहिर आउनुमा भने गौरीकी नजिककी साथी नीलम कोठारी रहेको बुझिएको छ ।
कोठारीले नै सञ्चारमाध्यमलाई प्रियंका शाहरुखको पछि लागेको दाबीसहितको समाचार दिएकी थिइन् । यति मात्रै कहाँ हो र ? उनले त आफू प्रियंकासँग झगडा नै गर्न गएको पनि बताएकी छन् । तर हल्ला बढ्दै गएपछि भने पूर्वनायिका कोठारीले आफ्नो ब्लगमा उक्त कुरालाई मान्न तयार भएकी छैनन् । 'थाहा छैन, आज सार्वजनिक भएका समाचार (शाहरुख-गौरी सम्बन्ध संकट) बारे कसरी प्रतिक्रिया दिऊ । जब कि उक्त हल्ला मैले चलाएको बताइएको छ,' कोठारीले आफ्नो टि्वटर पेजमा उल्लेख गरेकी छन्, 'म दुःखी र आश्चर्यचकित भएकी छु । लाग्छ, मेरो पूरा जीवनमै यस्तो कन्ट्रोभर्सी सायदै कहिल्यै आउला ।' उनले शाहरुख र गौरी आफ्ना नजिकका साथी भएको बताए पनि पछिल्लो सम्बन्धका बारेमा भने केही टिप्पणी गरेकी छैनन् ।
कोठारीले आफूले पि्रयंकासँग झगडा गरेको पनि झूट भएको बताइन् । तर शाहरुख र गौरीले भने आफ्नाबारे फैलिएका पछिल्ला समाचारमा केही बोलेका छैनन् । न त प्रियंकाले नै ।